DHAGEYSO Ciidanka xoogga Soomaaliya oo howlgalo wadooyin kala furayo bilaabay. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO Ciidanka xoogga Soomaaliya oo howlgalo wadooyin kala furayo bilaabay.
Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan qeybta 60-aad eek u sugan gobolada Bay iyo Bakool ayaa bilaabay howlgallo ka dhan ah Al-ururka Shabaab kuwaasoo la isugu furayo wadooyinka ay go’doonsan ee Gobolka Bakool.
Ciidamo farabadan oo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa inay dhaq dhaqaaqyo ka wadaan degma CeelBarde ee Gobolka Bakool iyo deegaano kale oo ka agdhow,waxaana ciidankaasi la gaarsiiyay saanadii Millateri ee ay ku howlgali lahaayeen.
Degmada Ceelbarde ayaa waxa gaaray wafdi saanad millateri u waday Ciidamadaas oo uu hoggaaminayay Ra’iisul Wasaare ku xigeenkii hore ee Soomaaliya ahna Xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka Cabdi wahaab Ugaas Xuseen Ugaas khaliif,waxaana saanadaaas ay ku wareejiyeen Saraakiisha ciidamada ee ku sugan magaalada ceelbarde.
Guddoomiyaha degmada Ceelbarde Cabdi Fitaax Cumar iyo Gaashaanle Sare Xasan Xukun oo isna ka mid ah Saraakiisha Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa si wadajir ah u sheegay inay muhiimad leedatay in ciidamada xooga ee Howlgalada ku jira laga taakuleeyo waxyaabaha ay u baahan yihiin sid ay u gutaan waajibkooda.
Xildhibaan Cabdi Wahaab Ugaas Xuseen Ugaas khaliif ayaa isagoo la hadlayay ciidamada xoogga wuxuu ku booriyay inay ciidamadu laba jibaaraan dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab.
← DHAGEYSO Doorashada koonfur Galbeed oo la doonayo inay dhacda xiligii horay loogu asteeyay.
DHAGEYSO Dadkii ku barakacay dagaalada gobolka Sool oo macluul wajahaya. →